Football Khabar » च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोनाको बाटोमा फेरि इटालियन टिम !
च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोनाको बाटोमा फेरि इटालियन टिम !
काठमाडौं, मंसिर ३०
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत जारी सिजनका लागि अन्तिम १६ को ड्र सार्वजनिक भएको छ । सोमबार साँझ स्वीट्जरल्यान्डको नियोनस्थित युइएफएको केन्द्रीय कार्यालयमा ड्र भएको हो ।
ड्रअनुसार यसपटक अन्तिम १६ मा केही ठूला टाई परेका छन् । जसमा स्पेनिस रियल मड्रिड र इंग्लिस क्लब म्यानचेस्ट सिटी अन्तिम १६ मै भिड्ने भएका छन् भने साबिक विजेता लिभरपुलले स्पेनिस एथ्लेटिको मड्रिड प्रतिस्पर्धी पाएको छ ।
त्यस्तै, स्पेनकै बार्सिलोनाले इटालीको बलियो टिम नापोली प्रतिस्पर्धी पाएको छ भने जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डले फ्रेन्च क्लब पिएसजी प्रतिस्पर्धी पाएको छ । यता, इटालियन युभेन्टसले भने फ्रेन्च क्ल लियोनलाई प्रतिस्पर्धी पाएको छ ।
प्रकाशित मिति ३० मंसिर २०७६, सोमबार २२:५६